हडताल गरे रुट नै खारेज गरिदिने सरकारको तयारी | Everest Online News
Reporter: Everest Online News Home Ministry, National Traffic Federation National Federation, Syndicate, यातायात व्यवसाय
यातायात व्यवसाय कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध हडतालको घोषणा गरेका यातायात समितिको कार्यक्रम असफल बनाउन सरकार पनि तयारीमा छ । हडतालको समर्थन गर्दै नचलाउने सवारीसाधनको रुट नै खारेज गरिदिने चेतावनी छ । यसबाहेक, यातायात व्यवस्था विभागमा कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएका २२ कम्पनीका ६१९ गाडी गुडाउने तयारी छ । देशभर ५० प्रतिशत सवारी गुड्ने अपेक्षा गरेको विभागले सबै सवारीसाधनका लागि सुरक्षाको बन्दोबस्त मिलाएको पनि बताएको छ ।
त्यसपछि ४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अहिलेसम्म दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण नहुने र नयाँ दर्ता नगरिने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै सरकारी निर्णयको विरोधमा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । एनजिओ (गैरसरकारी संस्था)का रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दर्ता तथा नवीकरण हुँदै आएका ती समिति करको दायरामा आउनुपर्ने र आलोपालो प्रणालीमार्फत सिन्डिकेट गर्न नपाएपछि विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
सवारीसाधन दुर्घटना हुँदा सरकारले क्षति पुग्ने व्यक्तिलाई न्यूनतम (३ लाख रुपैयाँसम्म) बिमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसबाहेकको क्षतिपूर्ति समितिहरूले व्यहोदै आएका थिए । अब सरकारको व्यवस्थापनमा उपचार र क्षतिपूर्ति कसले कसरी व्यहोर्छ ? कल्याणकारी कार्य गर्ने भनेर समितिहरूले गैरकानुनी रूपमा रकम उठाउने र खर्च गर्ने गरिरहेका थिए । समितिलाई यसो गर्ने अधिकार नै थिएन । यो गम्भीर विषयलाई सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत बिमा समितिसँग छलफल गरिरहेका छौँ । बिमा समिति सकारात्मक छ । बिमा रकमलाई सीमित नगरेर असीमित बनाउनेतर्फ क्रमैसँग अघि बढ्ने गन्तव्यबारे छलफल भइरहेको छ । यस विषयलाई सम्बोधन गर्नेबारे तत्कालै केही न केही उपाय निकालिनेछ । असीमित बिमा कार्यान्वयन तयारी गर्न नै वर्षदिन लाग्ने बिमा समितिले जानकारी गराएको छ ।
धेरै (उदाहरणका लागि २ सय वटा) गाडी भएको एउटै कम्पनी वा कम्पनीहरू मिलेर सिन्डिकेट गरे भने त्यसको नियन्त्रण कसरी हुन्छ ? त्यो हुने कुनै सम्भावना नै छैन । कम्पनीमा दर्ता हुनेबित्तिकै उसको प्रबन्धपत्र हुन्छ । नियमावलीभित्र बस्नुपर्छ र सरकारको कानुनी दायरामा हुन्छन् । अहिले एनजिओका रूपमा दर्ता भएकाले जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत रहेकाले यातायात व्यवस्था विभागले केही गर्न सकेन । दादागिरी देखाए । तर, कम्पनी हुनुबित्तिकै कुनै पनि कम्पनीलाई एकपटक स्पष्टीकरण सोधिनेछ । अर्कोपटकमा खारेज गरिनेछ ।